Bambisana Icala - IRaymin Display Products Co, Ltd.
Ngokwakheka kwalesi sikhangiso se-pallet, ikhasimende belingenazo izidingo ezicacile ekuqaleni, futhi lokho ebesinakho okuvela kuye yi-Walmart Packaging Standards Guideline. Ikhasimende belingazi nakancane ukuthi liyibonisa kanjani imikhiqizo yeqembu labo. Bavele basitshela ukuthi yini ezokhonjiswa kule yunithi.
Njengoba besineqembu lonjiniyela bazi kahle izidingo ze-Walmart Display, Sithuthukise ngokushesha ukunikezwa kwe-3D ukuze kubhekiselwe kubo.
Ngemuva kokusebenza okuningana kokuhlola umhlahlandlela nokuqinisekisa nekhasimende, ekugcineni siqinisekisile usayizi, futhi sathumela izifanekiso zomugqa wokufa kukhasimende ukuze lakhiwe ngobuciko. Ikhasimende imvamisa lidinga ukuthatha izinsuku ezi-5 ukuzungeza umsebenzi wobuciko. Umsebenzi wobuciko kufanele ube yi-AI noma ifayili le-PDF.Ngemva kokuthola umsebenzi wobuciko, sizohlola ngokushesha ukuthi ngabe kukhona amafonti alahlekile, futhi sizothumela emuva imvume yekhasimende ukuthi lihlole ngaphambi kokuhlekisa ngesampula.
Ngemuva kokuthi ikhasimende linikeze umsebenzi wobuciko wokuklama, inkampani yethu yenza isampula yombala ukuze ikhasimende liqinisekise. Njengoba i-Walmart inesidingo esiphakeme kumbala, banikeze imvume yemibala yokuthi silandele umbala lapho senza isampula. Ifektri idinga ukulandela umbala eduze ngangokunokwenzeka kusampula yombala enikeziwe.
Sisebenzisa ngokuqinile uhlelo lokuphathwa kombala lwe-GMI ngesikhathi senqubo yokuphrinta ukuqinisekisa ukuzinza kombala kunqubo ngayinye yokuphrinta iqoqo. Lokhu akusizi nje kuphela ukuthi umbala wengxenye ngayinye ulingane kahle, kepha futhi ulawula umehluko wombala phakathi kokuphrinta okusha nokudala.
Iphrinta enhle iyikhontrakthi esezingeni elifanele ezinyathelweni ngakunye zokukhiqizwa kwamakhadibhodi amaningi. Asikhathaleli nje kuphela ukuphrinta, kepha futhi sikhathalela nokuthi ngabe okuqukethwe kwayo bekunamandla anele ukubamba isisindo somkhiqizo. Isampula emhlophe izosebenza kakhulu kumakhasimende ukuthi enze ukuhlolwa. Sinikeza amasampula amhlophe mahhala, futhi isampula emhlophe yoku-oda ngaphambilini yokulandela isakhiwo nayo ibisebenza.
Ithimba lokukhiqiza lingahlola ukuthi ngabe konke bekungalungile yini ngokufanele. Bangashesha ukuthola uma kukhona amaphutha lapha. Sizophinda sihlanganise isibonisi ukuze siqiniseke ukuthi konke kulungile, ngaphambi kokuthi kusiwe kumakhasimende.